ကျွန်မကောလိပ်များအတွက်မည်သို့လျှောက်ထားကြဘူး? | ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအဘို့သတင်းအချက်အလက် | USAHello
ကောလိပ်ကျောင်းမှ Going အသက်တာ၌တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. သငျသညျအကောင်းတစ်ကောလိပ်လျှောက်လွှာစေသည်အရေးကြီးသောကြောင့်. ကောလိပ်ကျောင်းလိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းကို Read, ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးအစားများ, နှင့်ကောလိပ်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရန်မည်သို့.
USA တွင်, လူတွေကမကြာခဏဆိုသညျကား “ကောလိပ်ကျောင်း” သို့မဟုတ် “ကြောငျး” အထက်တန်းကျောင်းအပြီးတက္ကသိုလ်များနှင့်အခြားပညာရေးများအတွက်. ကောလိပ်ကျောင်းသို့ရယူခြင်းရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျခဲယဉ်းလေ့လာနေနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်ခြင်းဖြင့်သင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျကွီးစှာသောကျောင်းသားများမှာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမှာကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီဆိုလျှင်တောင်မှ, သင်ဆဲကောင်းတစ်ကောလိပ်လျှောက်လွှာစေရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးစွာသင်တက်ရောက်ရန်ချင်ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုထုတ်တွက်ဆရမယ်. လူနာ Be နှင့်လက်ျာသတင်းအချက်အလက်အဆင်သင့်မရ. ဒါဟာသင်ချင်ကျောင်းသို့အရကူညီကြမည်.
သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းနေစဉ်ပြင်ဆင်နေ Start. အရေးအပါဆုံးအရာအထက်တန်းကျောင်းကောင်းသောအဆင့်ရရန်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအပိုလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသင့်တယ်, လွန်း. ဒါဟာကလပ်ကိုဆိုလိုသည်, အားကစား, နှင့်အပိုအတန်း. ကောလိပ်များလည်းသင့်ရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်မှာကြည့်ရှုမည်. သူတို့သည်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရန်လိုခငျြ “ကောင်းစွာ rounded”. ဒီအသင်သည်များစွာသောအမှုအရာအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်, မရင့်ကျောင်းက.
နှစ်တစ်နှစ်ကောလိပ်မှဝန်ခံခဲ့သည်ခံရဖို့, လေးနှစ်ကောလိပ်ကျောင်း, သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်, သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရမပြုခဲ့ပါလျှင်, သငျသညျအစားအထက်တန်းကျောင်းတခုတော့စမ်းသပ်မှုယူနိုင်ပါသည်. ဒါဟာကျောင်းကသင်ကြားလူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. ရှည်လျားသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျလွန်သွားလိုလျှင်, သင်ကောလိပ်ကိုသွားဖို့လုံလောက်တဲ့ပညာရေးများပြသထားတယ်.
သင်သည်သင်၏အထက်တန်းကျောင်းတခုတော့ဒီပလိုမာဝင်ငွေနိုင်ပါတယ် (ခေါ်တော်မူ GED® HiSET သို့မဟုတ် TASC သို့မဟုတ်) အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များမှာ. သင်တို့သည်လည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အညနပေိုငျးအတန်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူ အခမဲ့ GED ပြင်ဆင်မှုအတန်းအစား.
ကနေရှေးခယျြဖို့အများကြီးကောလိပ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. သင်လေ့လာဖို့နှင့်သင်မည်မျှပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်လိုချင်တာတွေအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ် go အဘယ်မှာရှိ. သငျသညျရွှေ့သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ချင်လျှင်သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
ရပ်ရွာကောလိပ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များကနေဘွဲ့ရတဲ့သူကျောင်းသားများမကြာခဏလက်မှတ်များသို့မဟုတ်တွဲဖက်ဒီဂရီလက်ခံရရှိ. Associates မှဒီဂရီလေ့လာမှု၏ပတ်ပတ်လည်နှစ်နှစ်ယူ. ရပ်ရွာကောလိပ်များတစ်လူနေမှုလုပ်အားခကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်ကျောင်းသားများကိုအရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုရဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ဤလူမျိုးအဘို့ငွေအလုံအလောက်ပေးဆောင်ဆိုအလုပ်အကိုင်များကိုဆိုလိုသည်. Living လုပ်အားခသည်လည်းသင်တို့နှစ်ဦးကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလိုအပ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အစိုးရအနေဖြင့်ကူညီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်. တချို့ကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များကျောင်းသားများအတွက်လေးနှစ်ကောလိပ်များမှလွှဲပြောင်းကူညီရန်အစီအစဉ်များရှိ.
ရပ်ရွာကောလိပ်များတက္ကသိုလ်များထက်သေးငယ်များမှာ. သူတို့ဟာသေးငယ်တဲ့မြို့များနှင့်မြို့ကြီးများတွင်နှစ်ဦးစလုံး၌ရှိကြ၏. ရပ်ရွာကောလိပ်များကျောင်းသားများကိုအခြိနျပိုငျးတက်ရောက်ရန်ပါစေ. သူတို့ကအစတက္ကသိုလ်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း.
သူတို့အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးပြီးနောက်အတော်များများအမေရိကန်တွေဟာလေးနှစ်ကောလိပ်ကိုသွား. တစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ရုံဘွဲ့ကြိုမပေးကမ်းလှမ်းတဲ့ကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ် (လူပျိုကြီးရဲ့) အရမ်းဒီဂရီပေမယ့် Post-ဘွဲ့ရဒီဂရီ (သခင်၏သို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့). ဘွဲ့နှင့်သခင်၏ဒီဂရီသင်သည်ဘွဲ့ရတဲ့အခါသင်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီကြမည်.
လေးနှစ်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များထက်သို့ရရှိရန်ခက်ခဲရှိပါတယ်. သင်ရိုက်ထည့်ရန်စမ်းသပ်မှုသွားရပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရှောကျသှားဖို့လိုအပျအသုံးအများဆုံးစမ်းသပ်မှု SAT ဟုခေါ်သည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့စာဖတ်စမ်းသပ်, စာအရေးအသား, နှင့်သင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု.
ကောလိပ်များပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူဖြစ်စေကျောင်းများရှိနိုင်ပါသည်. ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များအများပြည်သူကောလိပ်များထက်အများကြီးပိုပြီးပိုက်ဆံကုန်ကျ. သို့သော်, ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါကပိုပညာသင်ဆုပိုက်ဆံရှိစေခြင်းငှါ. ကျောင်းသားများကိုပိုပြီးဆရာများစကားပြောရနိုင်အောင်သူတို့ကသေးငယ်အတန်းရှိ.
ကောလိပ်ကျောင်း applications များလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျကောလိပ်စတင်ချင်မီအောက်တိုဘာလနှစ်တွင်ကောလိပ် applications များဖြည့်စွက်စတင်နိုင်ပါသည်. ကောလိပ် applications များဇန်နဝါရီလခြင်းဖြင့်ကိုလက်စသတ်ခံရဖို့လိုအပ်. application များဖြည့်စွက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာဒါဟာကြာ. သငျသညျနံနကျစောစောစတင်ဖြည့်စွက်သင့်တယ်6သို့ 8 လျှောက်လွှာများ.
ကောလိပ် applications များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကုန်ကျ $40 အသီးအသီး, ဒါကြောင့်သာသင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်ကျောင်းများလျှောက်ထား. အကောင်းဆုံးကိုပညာရေးရှိခြင်းကြောင့်လူသိများကြသည်ကောလိပ်များအလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်အများအပြားကျောင်းသားများကိုလျှောက်ထားသည်ဟုဆိုလိုသည်ပေမယ့်အများစုမရကြဘူး. သငျသညျကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်ကျောင်းများမှလျှောက်ထားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသို့ရရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းအချို့သောကျောင်းများမှလျှောက်ထားရန်လိုပေမည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုသို့မရကြဘူးအမှု၌တည်ရှိ၏.
သငျသညျတက်ရောက်ရန်လိုသည့်ကောလိပ်ကျောင်းသင်သိလိုလျှင်, သငျသညျလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်ယူရန်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်လိုအပ်ကဘာလဲ:
တစ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြေညာချက်: ဤသူသည်သင်တို့ကိုဤကျောင်းသို့သွားချင်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုတစ်အက်ဆေးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အဆင့်အကြောင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ထောက်ခံချက်၏နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအက္ခရာများ: သင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီဆရာများသို့မဟုတ်လူမြိုးမှအက္ခရာများ. ကျောင်းသင်၌ပါစေသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤရွေ့ကားအက္ခရာများပြောပါလိမ့်မယ်.
test ရမှတ်များ: တက္ကသိုလ်များအတွက်, သင်တစ်ဦး SAT သို့မဟုတ် ACT စမ်းသပ်မှုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဤရွေ့ကားသငျသညျကြောငျးတှငျသင်ယူရှိသမျှကိုဘာသာရပ်များအပေါ်စမ်းသပ်မှုများမှာ. A ကောင်းဆုံးရမှတ်သင်ကောလိပ်ကျောင်းသို့အရကူညီကြမည်
သငျသညျသငျ၌ရတယ်ပြောပြစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ရရှိမည်. ဒါကမတ်လ 1st နှင့်မေလ 1 ရက်နေ့တွင်အကြားဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ကျောင်းမှသို့ရတယ်လိုလျှင်, သင်ဘယ်မှာသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်. ကုန်ကျစရိတ်ကိုစဉျးစား, တည်နေရာ, နှင့်ပညာရေးဘယ်လောက်ကောင်းသော. အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်မကျောင်းများတွင်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောပြပါသို့မဟုတ်. အချို့သောကျောင်းသားများစောင့်ဆိုင်းစာရင်းအပေါ် get, အရာတစ်စုံတစ်ဦးသူတို့လိုခငျြမပါဘူးဆိုရင်သူတို့သာအစက်အပြောက်ရရှိမည်ဆိုလိုတယ်. အစောပိုင်းပြန်ခြင်းအခြားကျောင်းသားများကိုကူညီကြမည် (သို့မဟုတ်သင်) သူတို့ကကျောင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်လျှင်သိပါ.
အချို့သောကျောင်းသားများကောလိပ်ကျောင်းသို့သူတို့လျှောက်ထားပထမနှစ်တွင်မရကြဘူး. သငျသညျရမထားဘူးဆိုရင်, ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
ကိုလှိမ့ဝင်ခွင့်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တချို့ကကောလိပ်များ. ဤသည်ကိုသူတို့တဦးတည်းအချိန်မှာအားလုံးကျောင်းသားများကိုလက်မခံကြဘူးဆိုလိုသည်. အစား, လူအပေါင်းတို့သည်အစက်အပြောက်သွားကြောင်းများမှာသည်အထိသူတို့တစ်တွေအချိန်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတစ်ဦးကိုလက်ခံ. left အစက်အပြောက်ရှိပါတယ် အကယ်., သငျသညျနှောင်းပိုင်းနွေဦးသို့မဟုတ်နွေရာသီတွင်ဤကျောင်းများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
သငျသညျတစျနှစျကိုချွတ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်နှင့်ငွေကယ်ဖို့အလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ,. သငျသညျကောလိပ်များသုတေသနနှင့်သင်နောက်နှစ်လျှောက်ထားချင်ဘယ်မှာဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ရလိမ့်မည်. သင်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကိုလည်းတစ်ဦးအလုပ်သင်ရဖို့ကြိုးစားနိုင်သို့မဟုတ်လယ်ပြင်၌စေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဘူး. တစ်ဦးအလုပ်သင်အနေနဲ့မရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီအတှေ့အကွုံမြားသငျသညျကိုသူတို့လျှောက်ထားလာမည့်အချိန်ရကူညီပေးပါမည်.
ကောလိပ်ကျောင်းလျှောက်ထားရှည်ဖြစ်စဉ်ကိုဖွစျစနေို. ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းယူ. သင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးအတွက်မရကြဘူးဆိုရင်တောင်, အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
အဆိုပါ FAFSA ထုတ်ဖြည့်